အပူခန်းခြောက်စက်နှင့်အာလူးကြော် DPHG0808080S-G TSIX မှအပူခန်းခြောက်စက် | Twesix
ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခေါက်ဆွဲများ, ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ စျေးကွက်တွင်ဆန်, ဂျုံနှင့်အာလူးကဲ့သို့သောခေါက်ဆွဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းသုံးခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အပူချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ Tsix Noodles Sprerter ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ကြမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Darch Dangurodels ကွဲပြားခြားနားသော noodels ခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောခေါက်ဆွဲများအတွက် Tsix ရေဒရိတ်စက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာ setting ။ ရေခန်းခြောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေါက်ဆွဲများ ထပ်မံ. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဒီနေ့ခြောက်သွေ့သောဆန်ခေါက်ဆွဲကိုဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်သောက်နေသည်
ဘယ်လိုခြောက်သွေ့လဲ ဆန်ခေါက်ဆွဲ Tsix Noodles Dryer က
1. ဗန်းပေါ်ရှိဗန်းခေါက်ဆွဲပေါ်ရှိဗန်းခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ် Hange ခေါက်ဆွဲပေါ်တွင်ထိန်သိမ်းပေါ်တွင်ထိန်သိမ်းခြင်းကို Tsix အခြောက်ခံစက်ထဲသို့တွန်းပို့ပါ
အပူချိန်ကို 16 ℃, စိုထိုင်းဆ 55% ~ 65% ကိုအသုံးပြုပါ။ ထမလာပါနဲ့ အပူချိန်။ ခေါက်ဆွဲကိုပုံဖော်ရန်နှင့်ခေါက်ဆွဲ၏မျက်နှာပြင်တွင်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်အေးမြသောလေကိုအသုံးပြုခြင်း
3. အပူချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းထပြီးအပူချိန်ကို 30 ℃ ~ 35 ℃, စိုထိုင်းဆကို 30 ~ 40 မှ 40 မိနစ် 20% -85% ။
4. အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုဆင်း။ အပူချိန်။ အပူချိန် 35 ℃ ~ 45 ℃, စိုထိုင်းဆ, စိုစွတ်သော 65% ရှိအပူချိန် 65% ။
5. အပူချိန်နှင့်အပူဖြိုဖျက်ခြင်း။ ခေါက်ဆွဲများ၏အစိုဓာတ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပါဝင်ခြင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချပါ။
အပူချိန်အပူချိန်အပူချိန်, အစိုဓာတ်, လေထုစီးဆင်းမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ခြောက်သွေ့သောကာလတွင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းမရှိသင့်ပါ။ ခြောက်သွေ့စက်တွင်အပူချိန်အလွန်မြင့်မားနေသည့်အပူချိန်တွင်ခေါက်ဆွဲများကိုမခြောက်စေခြင်းမရှိဘဲကျိုးပဲ့စေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးကာလတွင်အပူချိန်သည်မြင့်မားနေဆဲသို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲများကိုအလွယ်တကူကျိုးပဲ့နိုင်သည်။ ခေါက်ဆွဲပြီးသွားရင်ခြောက်သွေ့ပြီးတဲ့နောက်လေထဲမှအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူရန်ခေါက်ဆွဲများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးပါ
Tsix အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်အပူချိန်မြင့်မားရန်အပူစုပ်စက်ဖြစ်သည်။ အပေြာင်း
Compressor သည်အအေးကိုအပူမြင့်စေသည်။ နှင့်မြင့်မားသောဖိအားဓာတ်ငွေ့, က
အပူစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်အခါ pass အခါအရည်ဖြစ်လာသည်
အပြင်ဘက်မှ Refresh Air ကိုအပူပေးရန်အပူပြန်အသုံးပြုရန်စနစ်ရှိသည်
လတ်ဆတ်သောလေထုကို 60% - 70% - 70% သောလေထုကိုအပူပေးနိုင်သည်။
ခြောက်သွေ့သောစက်ကိရိယာတစ်ခုလုံးတွင်ခြောက်သွေ့ခြင်း, ခြောက်သွေ့သောအခန်း, ပရိတ်သတ်များ,
အပူစုပ်စက်ခြောက်စက် ခန်းခြောက်ခန်း ကျဆုံးခြင်း
အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်ကို condenser, အပူဖလှယ်သူ, အီလက်ထရောနစ်တိုးချဲ့ valve, plc controller, compressor စသည်တို့ပါဝင်သည်
အပူခန်းခြောက်စက် ဆန်ခေါက်ဆွဲခြောက်စက် Noodle ခြောက်သွေ့သော machne